Isi okwu maka Macs, Project Titan, Siri ọrụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Kacha mma n'izu na m si Mac | Esi m mac
Isi okwu maka Macs, Project Titan, Siri ọrụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Nke a bụ enweghị obi abụọ otu n'ime ndị izu na niile Mac hụrụ na-eche ya na-abịa. N’izu a ka emechara emume ahụ ebe ụmụ okorobịa si Cupertino ga-ewetara anyị Macs ọhụrụ na n'etiti ha a MacBook Pro na ọ bụrụ na asịrị na-emezu, ọ ga-abụ ikpọ. Eziokwu bụ na n'izu a malitere site na asịrị banyere ụbọchị nke Apple ga-eme ihe omume ya maka kọmputa na njedebe emesiri ya na mwepụta nke akwụkwọ ịkpọ oku na mgbasa ozi "Ndewo ọzọ" a doro anya n'isi ka Mac.
Mana ọ bụghị naanị na anyị ahụla akwụkwọ ịkpọ oku, izu a nke ọnwa Ọktọba nwere ọtụtụ ihe karịa ngosi a echere ogologo oge nke ga-eme na Tọzdee na-esote, ọ bụ ya mere anyị ga-eji hụ ndị pụtara ìhè na m. si Mac.
Ka anyị malite site na oru ngo Titan. Ọ bụrụ na ndị Apple ụgbọ ala na, dị ka anyị tụlere na Actualidad iPhone pọdkastị, kere site na mgbasa ozi onwe ha, ha mepụtara ya ma ugbu a ọ dị ka ha gburu ya ruo n'afọ ọzọ. Apple ekwuputaghi na o nwere oru nke ugbo ala, ma o doro anya na onwere ihe mgbe onye obula na ekwu banyere ya, ugbua ihe oru a yiri ka o kwusi.
Siri na-aga n'ihu na-abụ protagonist n'etiti ajụjụ ndị ọrụ ọ bụkwa na ọ na-enye anyị ọtụtụ nhọrọ ebe ọ rutere macOS Sierra. Lee, anyị hapụrụ gị ndị ọzọ ọtụtụ nhọrọ ị nwere ike ịjụ nnyemaaka na m na-emere gị. Ọ bụrụ na ị na-ele anya na weebụ ị ga-ahụ ọtụtụ ndị ọzọ.
MacOS Sierra beta 5 ọ dịlarị n'aka ndị mmepe na ndị ọrụ nọ na mmemme beta. Betadị beta ndị a eyighị ka ha gbakwunye nnukwu mgbanwe ndị ọzọ karịa mmelite arụmọrụ na nchọpụta nsogbu, mana ha na-ahapụ ịwelite mmelite na ịkọwa nkọwa nke dị mma maka onye ọrụ.
N'ikpeazụ, anyị enweghị ike ichefu aha ụlọ ọrụ na "abụghị Apple" ka edepụtara aha maka ụlọ OLED na - emetụ aka nke ga - ejikọ MacBook Pro ọhụrụ nke a ga - ewepụta na Ọktọba 27. Na Ogwe Anwansi ọ nwere ike ịbụ aha ha jiri kọwaa ụlọ ọrụ a na kọmputa Apple ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Isi okwu maka Macs, Project Titan, Siri ọrụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
MP3 Ihe Ntụgharị Pro, n'efu maka obere oge
Nke a bụ ihe ndị kasị dị ize ndụ malware maka Mac zere